Tononkira taombaovao | Hevitra MPANOHARIANA
mmhhh, (kohaka kely)... ary sambatsambatra ve Razoky nanoratra io sa izaho no mbola jambenan'ny afomanga, ha, ha, ha!!! Arahabaina aloha tafita tamin'iny 2009 sarotra iny ary irariana mba ho moramora kokoa ny hahatafitàna ny 2010 e! izay no hitako hifampirariantsoa @izao vanim-potoana izao, (fa ny firarian-tsoa @ ankapobeny fanao isan'andro, isan'ora, isaky izay azo anaovana azy), ary raha tsy diso aho dia izay koa no tena firarian-tsoa malagasy "tratry ny taona ary dia samy ho tratry ny ho avy indray" fa zary adino fa efa saron'ny fanjanahana sy ny glaobalizasiona loatra!(prosperité,... aho hoe!) Ny hoe tratrany aloha dia mila enti-mody iray manontolo ny famakafakana azy io, fa aleo fehezina fotsiny amin'ny hoe hisaorana an'Andriananahary noho ny vita hatrizay sy izay vaovao omeny indray...
Dia misaotra anao "misy" Jentilisa, trara antitra ary mifanantera amin'ny zanaka aman-jafy (firy tokoa moa izao, hi, hi!)
Dia mamihina anao am-pitiava-namana lehibe! Ho 2010 feno fahasoavana sy fitahiana, ary hahazoana izay rehetra iriana, amin'ny anaran'Ilay nankalazaina t@ Noely anie ity.
Nampidirin'i gasi @ 10:22, 2010-01-02 [Valio]
Misaotra anao amin'ny soratra rehetra nataonao ,makatelina sy mankasitraka ary manatena ny ahitantsika ny Fandriampahalemana sy ny fivoarana ary ny fandrosoan'ity tanintsika ity!
Nampidirin'i Mandimbisoa @ 13:01, 2010-01-02 [Valio]
Lasa mihomehy indray aho! tsy sambatrambatra mihitsy aho ka! izaho anie tsy misotro toaka e! fa mitady ilay somary ihomehezana voalohany taona mihitsy aho dia io no vita
Nampidirin'i jentilisa @ 13:08, 2010-01-02 [Valio]
Tratry ny taona ô.
Tohizako ny fandinihina vinaninany : zah koa mba mieritreritra toa anao rehefa mahazo firariantsoa tahaka ireo. Raha misy mirary ahy ho sambatra dia hoy aho hoe : tsy sambatra angah aho taloha, sns hihihi
Ka ny vahaolana sy hitako ho metimety kokoa rehefa mirary soa olona dia ny hoe :
- ho salama hatrany anie (raha tsy marary ilay olona mazava ho azy)
- hahay hionona (satria amiko dia io no fahasambarana)
- ho ambinina amin`izay hatao hatrany
Izany hoe asiana hoe "hatrany".
Nampamdefa eritreritra ahy koa ilay hoe "tratry ny taona" sa "nahatratra ny taona". Ka ity zaraiko ity ny fomba fijeriko kely :
- raha araka ny tokony ho izy dia "arabaina fa nahatratra ny taona" tokoa no fiteny. Satria ny taona no mandeha hatrany, sy tsy mijanona fa isika no manao izay hahatratrarana ny taona iray.
- na izany aza anefa dia toa vitsy ny olona henoko miteny an`io. Koa raha ny eritreriro dia tokony handefitra ny làlana fitsipi-pitenenana, indrindra rehefa miteny. Toy ny fandeferany amin`ny lafiny maro tahaka ny :
* arabaina sy arahabaina
* manaona sy manao ahoana
Mazotoa daholo e. Tsy milaza akory aho hoe kamolahy i jentilisa a hihihihi
Nampidirin'i Tokinao @ 15:55, 2010-01-02 [Valio]
"Tsy misy afaka manompo Tompo roa
Dia Andriamanitra sy ny vola
Tsy misy afaka manompo Tompo roa
Dia Andriamanitra sy ny harena..."
Faly miarahaba ny mpanoratra tratry ny taona vaovao 2010. Isaorana lehibe ianao tamin'ny lahatsoratra rehetra novokarinao teto.
ASA IZAY MBA HO ENTIN-DRY (ry taona 2010?)
Dia samia mahery sy mirongo finoana daholo isika rehetra!
Nampidirin'i HoAiza @ 03:59, 2010-01-03 [Valio]